Kooxda Jwxo-shiil oo Nairobi Isku Nacaladaysa – Rasaasa News
Feb 7, 2010 Jwxo-shiil, nairobi, riyaale, shafeec
Kooxda Jwxo-shiil oo meel walba isku haysata, halgankii ay dumiyeen dabayaaqadiisii ku murmaaya iyo Jwxo-shiil oo hunguri daraadii dilaal u noqday kooxaha mayalka adag.
warar hoose oo naga soo gaadhaya Nairobi, ayaa waxay sheegayaan in kooxdii halgan dumiska ee Jwxo-shiil ay qoolal isu haysato magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Is-hiifka iyo is-haaraanka ugu ba,ani waxaa uu ka dhextaagan yahay nin lagu magacaabo Cali Dheere Cadhoole oo wakiil uga ah Kenya Jwxo-shiil iyo Jaaliyada kooxda, ka dib kolkii uu Cali Cadhoole ka caydhiyey Jaaliyadii uu samaystay wiil la yidhi waxaa Abti u ah Maxamed Ismaciil [qaaxo] oo la yidhaahdo Ina Shafeec reer Xuduraylena ah.
Cali Cadhoole oo fulinaya amar uu Jwxo-shiil u soo dhiibay, ayaa loo sheegay in uu Jago uga dhiga gudoomiyaha Jaaliyada kooxda jwxo-shiil ee Narobi nin Ciise ah oo la baxsaday Riyaale Xaamud oo magaciisa naloogu sheegay Maxamuud.
Cali Cadhoole ayaan isaga oo aan cidna kala tashan, ku yidhi Ina Shafeec xilkii kooxda ku wareeji Maxamuud Xaamud, kolkaas ayuu wiilku yidhi waan in laga tashado isna waa amar buu ku yidhi, kolkaas ayuu ina shafeec yidhi wixii aad samaysatay u dhiibo.
Waxaa khilaafkan soo dhexgalay Qaaxo, isaga laftigiisa ayuuna Cali dheere af lagaadeeyey oo uu ku yidhi “guri hoos qabow baad fadhidaa markaas ayaad dooni in aad i amarto.” Qaaxo Jwxo-shiil ayuu la hadlay Jwxo-shiila wuxuu yidhi “Calidheere ayaa masuuliyadaas leh kuma kumana faragalin karo”.
Gudigii Jaaliyada kooxda ayaa waxay ku doodayaan, wiilku isaga ayaa jaaliyada sameeyey meeshuna saaxiib saaxiib aha. Kuli xubnaha kooxda jwxo-shiil ee beeshiisa ayaa u dhaqma si amar ah iyaga oo ogg in wax walba oo xumaan ah oo ay sameeyaan uu ka socon kooxda dhexdeeda.
Riyaale Xaamuud oo kolkii hore ee uu soo baxsaday ay la yimid afar xubnood oo beeshiisa ah, ayaa hada waxaa ka jooga Riyaale iyo Maxamuud, labadii kale waxay ku laabteen Jabuuti oo shaqo laga siiyey, waxaana xaqiiq ah in Riyaale lafttiisu Jabuuti aadidoono si loo umal celiyo oo uu Itobiya u tago.
Jwxo-shiil, waxaa uu noqday ninkii sadexaad ee halgan ay ummada Somalida Oadeeniya leedahay burburiyaa, ayaa hada ah dilaal u dhaxeeya Al Shabaab iyo Eritrea.